ऋणको भाका सार्न दाताहरुसँग अर्थमन्त्रीको आग्रह – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
ऋणको भाका सार्न दाताहरुसँग अर्थमन्त्रीको आग्रह
२८ चैत, काठमाडौं । सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे दातृ निकायहरुसँग आज लफल गरेको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाललाई दिइएको ऋणको भाका सार्न दातृ निकायलाई आग्रह गरे । बहुपक्षीय विकास बैकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारसंग अर्थ मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा शुक्रबार छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा विश्व बैक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एशियाली विकास बैक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैक जस्ता बहुपक्षीय विकास संस्था लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारी छलफलमा सहभागी थिए ।
विकास साझेदारहरुले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरुको सह्राहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएको मन्त्रलायले उल्लेख गरेको छ । छलफलमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाटविग सेफर, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषका निर्देशक च्याञ्योङ रि, अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष नेना स्टोजोभिक र एशियाली विकास बैकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन सहभागी भएका थिए ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव समेत सहभागी थिए ।